Diyaaradaha Israa'iil oo duqeyn ka fuliyey Marinka Gaza iyo magacyada dadka lagu dilay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Diyaaradaha Israa'iil oo duqeyn ka fuliyey Marinka Gaza iyo magacyada dadka lagu dilay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Diyaaradaha Israa’iil oo duqeyn ka fuliyey Marinka Gaza iyo magacyada dadka lagu dilay
Israaa’iil ayaa weerarro cirka ah oo is daba joog ah ku qaaday marinka Gaza ee dhulka Falatiin oo ay ka taliso xukuumadda Xamaas.
Weerarka ayaa lagu bartilmaameedsatay Goobo ay leeyihiin garabka hubeysan ee Xamaas. Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in ay subaxnimadii hore ee Sabtida duqeeyeen goob hubka lagu sameeyo iyo bakhaar rasaasta lagu kaydiyo.
Labada qof ee weerarka lagu dilay ayaa ka tirsanaa dagaalyahannada Garabka hubeysan ee Xamaas ee loo yaqaan Cizadiin Al-qasam, waxaana la shaaciyay magacyadooda iyagoo kala ahaa: Maxmoud al-Atal oo 28 sano jir ahaa iyo Maxammed Safadi oo 30 sano jir ah
Previous articleXiriirka K/Cagta Jubbaland oo dacwad ku soo oogay G/Banaadir [Ciyaaryahan Ajnabi ah-Akhriso]
Next articleMadaxweynaha Soomaaliya oo baaq ku saabsan Maalgashiga u jeediyay Madaxda Afrika [Sawirro]